Translate exercitadas from Portuguese to Xhosa - MyMemory
Results for exercitadas translation from Portuguese to Xhosa
Ignorar as Vezes Exercitadas
Nabo aba ke mabacikidwe ukuqala; bandule ke ukulungiselela, bengabangenakumangaleleka.
Laye inani lemikhosi yamahashe lizizigidi zezigidi eziphindeke kabini; ndaliva inani layo.
Ke zona iintsomi ezihlambelayo zamaxhegokazi zimangale. Ziqhelise ukuhlonela uThixo.
Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Kusaya kuza izizwe, nabemi bemizi emininzi.
Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Iindlela zenu zigqaleni.
Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Khawubuze umyalelo kubabingeleli, uthi,
Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Ndinekhwele, ikhwele elikhulu, ngeZiyon; ndinekhwele, ndinobushushu obukhulu ngayo.
Utshilo uYehova wemikhosi ukuthi, Gwebani ngesigwebo senyaniso, nenze inceba nemfesane elowo kumzalwana wakhe.
Izizwe ezininzi neentlanga ezinamandla ziya kuza kumquqela uYehova wemikhosi eYerusalem, zimbongoze uYehova.
Ezinye iintlanga ziya kumfuna uYehova Kwafika ilizwi likaYehova wemikhosi kum, lisithi,
Zonke iintlanga ziya kuthi ninoyolo, ngokuba niya kuba lilizwe elinanziweyo; utsho uYehova wemikhosi.
Kwafika ilizwi likaYehova wemikhosi kum, lisithi,
Ngoku ke andiyi kuba njengokwemihla yamandulo kumasalela aba bantu; utsho uYehova wemikhosi.
Evile ke ukumkani, waqumba, wayikhupha imikhosi yakhe, wabatshabalalisa abo babulali, wawutshisa nomzi wabo.
Xa nithe nayibona iYerusalem irhawulwe yimikhosi, yazini oko ukuba kusondele ukuphanza kwayo.
Isilivere yeyam, igolide yeyam; utsho uYehova wemikhosi.
i am very excited (English>Hindi)remains (German>English)hello, my love (English>Xhosa)atriale (Italian>Polish)halogenobutyl (German>Danish)séropositif (English>French)bumula ang bibig ng aso (Tagalog>English)cao (Vietnamese>Spanish)kompositionen (English>Russian)patrini fuerunt (Latin>English)fermoselle (French>English)tenancy (Tagalog>English)peanut (English>Tagalog)fjendtlighed (Danish>English)means of connection with another person (English>Malay)spamming meaning (English>Tamil)kaha gayi (Hindi>English)echte hazen (Dutch>French)kannu adurutam (Telugu>English)republicat (Romanian>English)nxgx semua (Javanese>Indonesian)macrogol, talco (Italian>Chinese (Simplified))jeongmal chohayo (Korean>English)magyarország (Spanish>Danish)picha za x kizungu swhili (Swahili>English)